Lehilahy roa 26 sy 51 taona mantsy no re fa mahita olona hamidy ka tany amin’iny faritr’Arivonimamo iny no nikasany hamarotana azy ka nitroatra ny vahoaka. Nanoloana io tranga io dia nametraka vela-pandrika ny mpitandro ny filaminana sy ireo tompon’andraikitra any an-toerana. Tokony ho tamin’ny 09 ora sy sasany maraina no nanaovana izany tao amin’ny fokontany Mangatany PK 41, lalam-pirenena I. Nigadona ny tamin’ny 11 ora atoandro, nipoitra tokoa ireo olona roalahy ireo ka voakasi-tanana avy hatrany ny iray noho ny hatezeran’ny fokonolona ary nampidirina hopitaly. Nentina natao fanadihadiana izy roalahy ary hiakatra fampanoavana anio zoma, hoy Randrianarisoa Manoa Vincent, Ben’ny tanànan’ny kaominina ambonivohitr’Arivonimamo. Nomarihiny fa mbola endrikendrika aloha hatreto no hitazomana azy mirahalahy mianaka ireto. Tsy mbola hita akory mantsy ireo olona voalaza fa hamidiny. Tsy niaraka tamin’ny fiara 4x4 ihany koa izy ireo, araka ny vaovao niparitaka tamin’ny tambajotran-tserasera facebook. Andrasana izay mety ho tohin’ny raharaha.